အကျင့်ပျက် ချ စား တဲ့ ဆော်ဒီ မင်းသား ကြီး ဦးသိန်းစိန် ကို ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ကျော် လက်ဆောင်ပေး ၊ NLD ပါတီ သို့မဟုတ် ပါတီ ၀င် အချို့ ကို ဒေါ်လာ သိန်း နဲ့ချီ ထောက်ပံ့ | The FNG
အကျင့်ပျက် ချ စား တဲ့ ဆော်ဒီ မင်းသား ကြီး ဦးသိန်းစိန် ကို ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ကျော် လက်ဆောင်ပေး ၊ NLD ပါတီ သို့မဟုတ် ပါတီ ၀င် အချို့ ကို ဒေါ်လာ သိန်း နဲ့ချီ ထောက်ပံ့
November 7, 2017 · by 21 South News	· in News.	·
အကျင့်ပျက် ချစားမှု ၊ ငွေကြေးခ၀ါချ မှု ၊ အာဏာ အလွဲ သုံးစား လုပ်မှု တွေ ကြောင့် ရီယာဒ် မြို့က ရဇ် ကာလ်တန် ဟိုတယ် မှာ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း ခံ ထား ရ တဲ့ ဆော်ဒီ ဘီလျှံ နာ မင်းသားကြီး အယ်(လ) ၀ါလိဒ် ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ အဲဒီ အချိန် က မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ငါးသောင်းကျော်လောက် တန်ဖိုး ရှိ တဲ့ ငွေသား သို့မဟုတ် လက်ဆောင် ပဏ္ဍာ တွေ ကို ပေး ခဲ့ ပြီး ဦးသိန်းစိန် က လည်း မင်းသား ကြီး ကို သမ္မတ ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ လက်မှတ် ပြန် ပေး ခဲ့ ပါတယ်။
LONDON, ENGLAND – APRIL 29: Suadi Prince Al-Waleed bin Talal and Princess Ameerah exit after the wedding of Their Royal Highnesses Prince William Duke of Cambridge and Catherine Duchess of Cambridge on April 29, 2011 in London, England. The marriage of the second in line to the British throne was led by the Archbishop of Canterbury and was attended by 1900 guests, including foreign Royal family members and heads of state. Thousands of well-wishers from around the world have also flocked to London to witness the spectacle and pageantry of the Royal Wedding. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
၂၀၁၃ နဲ့၂၀၁၄ ခုနှစ် တွေ မှာ ဆော်ဒီ မင်းသား ကြီး ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ ကို နှစ် ကြိမ် ထက် မနည်း လာရောက် ခဲ့ ပြီး တော့ နှစ်ကြိမ် စလုံး သမ္မတ ဦးသိန်း စိန် နဲ့တွေ့ ဆုံ ပြီး မင်းသားကြီး ဟာ သူ့ရဲ့Kingdom Holding Company နဲ့ပတ်သက် တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု တွေ ကို လေ့ လာ ခဲ့ ပါတယ်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉ ဘီလျှံ ချမ်းသာ ကြွယ် ၀ တဲ့ မင်းသားကြီး အယ်(လ)၀ါလိဒ် ဟာ လက်ရှိ အာဏာ ရ NLD ပါတီ ကို အာဏာ လက်မဲ့ ဘ၀ ကတည်း က ထောက်ပံ့ ပေး ကမ်း မှု တွေ ရှိ ပြီး NLD ပါတီ ၀င် တွေ ရဲ့ယူရီ နဲ့အမေရိက ခရီးစဉ် တွေ မှာ အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်း တွေ က နေ တစ်ဆင့် လေယာဉ် လက်မှတ် နဲ့ဟိုတယ် တည်းခို နိုင် ရေး တွေ စီစဉ် ပေး ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါ NLD ပါတီ ၀င် တွေ ထဲ က အချို့ ကို မင်းသား ကြီး ရဲ့အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ပက်ဆီ , ဖို့ ဒ် တို့က နေ တစ်ဆင့် ပညာသင်ကြား စရိတ် ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင်း လေ့ လာ ရေး စရိတ် တွေ ပေး ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားကြီး အယ်(လ)၀ါလိဒ် ဟာ ဟာ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ရိုဟင်ဂျာ အရေး ၊ ကလေး နဲ့မိခင် စောင့် ရှောက် ရေး တွေ အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ် သန်း လောက် လှုဒါန်း ခဲ့ ပါတယ်။
သူ ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုထပ် လာ ဖို့ရှိ ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် နဲ့ပါ တွေ့ ဖို့စီစဉ် ထား ပါသေးတယ်။
NLD ပါတီ ၀င် အချို့ ဖြစ်တဲ့ ဇင်မာအောင် နဲ့အခြား ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ရဲ့၂၀၁၄ ခုနှစ် အရီဇိုးနား ပြည်နယ် ဆီဒိုးနား မြို့ ခရီးစဉ် ကို ဂျွန် မက်ကိန်း ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်း က တစ်ဆင့် မင်းသား ကြီး ရဲ့အမေရိကန် ဖောင်ဒေးရှင်း တွေ က စီစဉ် ပေး ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား အယ်(လ)၀ါလိဒ် ရှယ် ယာ အမြောက် အမြား ၀င်ထား သည့် အမေရိကန် နှင့် ကမ္ဘာ တစ်လွှား မှ ကုမ္ပဏီ များ စာရင်း
EuroDisney (past) (France / now owned by The Walt Disney Company ona87.15%)
McDonald’s (past) (US)
Rotana Group (Arabic: روتانا), the Arab world’s largest entertainment company (present / 100%) (Saudi Arabia)
Tags: Al Waleed, Myanmar, NLD, Riyad, Saudi Arabia, Thein Sein
← ဆန် အန်တိုနီယို ဘပ်တစ် ဘုရားကျော င်း ပစ်ခတ် မှု ၂၆ ဦးသေဆုံး ပြီး ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရ
အမေရိကန် နိုင်ငံခြား ရေး ၀န်ကြီး ကို အိုဘားမား ထက် သာ တဲ့ ဂုဏ် ပြု မှု တွေ ကြိူ ဖို့ဒေါ်စု နဲ့စစ်တပ် စီစဉ် နေ →